Ụzọ atọ iji weghachite ehichapụ oziolu on iPhone
Olee otú iji weghachite ehichapụ oziolu on iPhone
N'ozuzu, oziolu ozi na-ẹkenịmde site na ekwentị ụlọ ọrụ na echekwara na ha na sava. The ozi-ekubi ume mgbe a ụfọdụ oge na a ga-ehichapụ ụlọ ọrụ si sava. Na nke a, ị nwere ike ghara weghachite na-ehichapụ Ozi olu. Ma ọ bụrụ na ị na-akwụ ụgwọ maka visual oziolu, ị nwere ike ibudata ozi olu gị ozi site na ihe nkesa gị iPhone, na i nwere ike ịnụ ya n'ebe ọ bụla na n'oge ọ bụla. Ọzọkwa, mgbe ị na mberede ehichapụ ọ bụ furu efu ha na-adịgide adịgide na gị iPhone, ị ka nwere ike naghachi ha.
Wondershare IPhone oziolu Iweghachite
Naghachi furu efu voicemails maka iPhone 6s (Plus) / 6 (Plus) / 5S / 5C / 5 / 4S / 4 / 3GS
Kpọmkwem naghachi ehichapụ ozi olu ozi olu si iPhone 6s (Plus) / 6 (Plus) / 5S / 5C / 5 / 4S / 4 / 3GS
Selectively weghachite gara aga ozi olu ozi olu si iTunes ndabere maka niile iPhones
Na-enye ohere iji naghachi iPhone ozi, kọntaktị, igwefoto mpịakọta, ndetu, na ndị ọzọ
Enye a ikpe mbipute na-a na-agbalị for free
Akwado ngwaọrụ Data dị naghachi
iPhone 6S Plus, iPhone 6S / 6 Plus / 5 / 5S, iPhone 5C, iPhone 5, iPhone 4S, iPhone 4, iPhone 3GS
iPad Air, iPad Obere na Retina ngosi, iPad Obere, iPad na Retina ngosi, The ọhụrụ iPad, iPad 2, iPad 1
iPod aka 5, iPod aka 4; iOS 9 akwado
Text ọdịnaya (8 ụdị): kọntaktị, ozi (SMS, iMessages & MMS, gụnyere Emoji), Kpọọ akụkọ ihe mere, Kalinda, Notes, WhatsApp-akparịta ụka, na-echetara, Safari ibe edokọbara
Media ọdịnaya (7 ụdị): Igwefoto Roll (Photo & Video), Photo Library, Photo Stream, Message Mgbakwụnye, Voice memos, oziolu, WhatsApp Mgbakwụnye
WhatsApp mkparịta ụka / Mgbakwụnye na oziolu ugbu a na-na na-akwado site na Mac version.
Naputa site na iPhone
Naghachi site iTunes
Olee otú iji weghachite oziolu on iPhone: 2 ụzọ
Dị ka visual oziolu na a zoputara na gị iPhone, e nwere ụzọ abụọ n'ihi na ị na weghachite ya: kpọmkwem iṅomi gị iPhone iji nweta ya azụ ma ọ bụ weghachite ya si gị iTunes ndabere ma ọ bụrụ na ị nwere àgwà ka mmekọrịta gị iPhone na iTunes.
Nkebi nke 1: Kpọmkwem iṅomi gị iPhone 4 / 3GS iji weghachite ehichapụ oziolu
Part 2: Ike iṅomi ma wepụ iTunes ndabere naghachi oziolu si gị iPhone 5 / 4S / 4 / 3GS
Mgbe ị na-ahọrọ otú a, mkpa ka ị mara na Wondershare Dr.Fone maka iOS (Mac) ugbu a nwere ike na-naghachi oziolu ozi site kpọmkwem ịgụ isiokwu iPhone 4 na iPhone 3GS. Ọ bụrụ na ị na-eji iPhone 6S Plus, iPhone 6S / 6 Plus / 6/5 ma ọ bụ iPhone 4S, i kwesịrị ka ịgbanwee gaa na ngwọta na akụkụ 2.
Nzọụkwụ 1. Jikọọ gị iPhone na kọmputa
Ka malitere, na-agba ihe omume na jikọọ na gị iPhone na kọmputa. Mgbe ahụ, ị ​​ga-ahụ window n'okpuru (Ọ bụrụ na ị na-eji iPhone 3GS, ọ ga-akpaghị aka download a nkwụnye na ebe a. Ọ bụ nkịtị. Dị nnọọ nweta ya okokụre).
Nzọụkwụ 2. Malite ịgụ isiokwu gị iPhone furu efu oziolu ozi
Wee soro ụzọ n'okpuru iji nweta n'ime scanning mode ike iṅomi gị iPhone:
Pịa Malite na window nke usoro ihe omume.
Press Ike na Home buttons na gị iPhone ugbu a n'ihi na 10 sekọnd.
Mgbe 10 sekọnd, hapụ Ike button na-anọgide na ịpị Home button ọzọ 15 sekọnd.
Mgbe ị na-asian na na ị nwetara n'ime scanning mode, na ihe omume na-amalite nyochasịrị na ịgụ isiokwu gị iPhone, ị nwere ike hapụ Home button na-eche maka a oge.
Nzọụkwụ 3. weghachite ozi olu gị si iPhone
Ọ bụghị naanị na oziolu ozi, Wondershare Dr.Fone maka iOS (Mac) nakwa enyocha kwa na naputa ọzọ data dị ka foto na vidiyo si Igwefoto Roll, ozi, kọntaktị, ndetu, wdg N'ihi oziolu, ị nwere ike pịa oziolu na n'aka ekpe nke window n'okpuru. Mgbe ahụ nne Mmetụta kwụsịrị ihe ị chọrọ (oziolu ozi na-agaghị ekwe ka ịhụchalụ, ị ga mma ịhọrọ ha niile mgbake), na pịa Naghachi na-azọpụta ha ka gị na kọmputa na otu Pịa.
Download free ikpe version n'okpuru nwere a-agbalị.
Nkebi nke 2: Iṅomi ma wepụ iTunes ndabere naghachi oziolu si gị iPhone 5 / 4S / 4 / 3GS
Ọ bụrụ na ị synced gị iPhone na iTunes n'ihu, visual oziolu ozi na-kwadoo n'ime iTunes ndabere. Na nke a, ị nwere ike weghachite gị ehichapụ oziolu ozi site adịrị ndị iTunes ndabere, n'agbanyeghị ma ọ bụrụ na ị na-eji iPhone 5, iPhone 4S, iPhone 4 ma ọ bụ iPhone 3GS.
Ị adịghị mkpa jikọọ gị iPhone ka comptuter mgbe ị ịmụta otú a. Na-agba naanị usoro ihe omume na kọmputa gị, na ịgbanwee iji naghachi n'aka iTunes ndabere File n'elu. Mgbe ahụ, ị ​​ga-ahụ window dị ka ndị a.
Ebe a, gị niile iTunes ndabere faịlụ na-achọta na loaded. Họrọ onye na maka gị iPhone na pịa Malite iṅomi wepụ ya.
Nzọụkwụ 2. Naghachi iPhone oziolu ozi
Doppler ga rechapụ gị sekọnd ole na ole. Mgbe ya, ị nwere ike ịlele niile ọdịnaya na nkwado ndabere na mpaghara faịlụ. Tinye akà rà anya nhọrọ nke oziolu na pịa Naghachi. Ugbu a ị na-azụ gị aga na iPhone oziolu ozi.
iPhone Bookmark Iweghachite: Olee naghachi ehichapụ Ibe edokwubara on iPhone
Iwu nzuzo nke Wondershare Dr.Fone maka iOS
Olee otú iji weghachite ehichapụ Nchetara on iPhone
> Resource> Naghachi iPhone Data> Olee otú iji weghachite ehichapụ oziolu on iPhone